Gịnị bụ otu ihe Androids Games ime ụlọ?
Androids egwuregwu ụlọ ịke bụ a pụrụ iche downloadable ngwa n'ihi na-eke na-akpali na-akpali akpali aghụghọ n'ihi na ụlọ online. Ọzọkwa, ọ na-agụnye Genres nke video egwuregwu na Android n'elu ikpo okwu na parades gameplays nke nwere ụlọ dị ka ya gburugburu. Na nke a ụdị egwuregwu ị ga-ahụ ibu nke na-akpali akpali, omimi, na-akpali akpali egwuregwu dị ka gị mgbe ahụ n'ihu. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na-akpọ egwuregwu na eleghị anya amaghị ebe na-amalite, ndị a anatara nke Android egwuregwu ụlọ ga-enyere gị aka.
Ebe a bụ ohere na-enye gị ụlọ grandmaster ezi uche 3D aghụghọ n'ihi na free. Roomstyler nwere ndị kasị ibu nso nke 3D site n'elu-klas ụdị. Ndị a ụdị dị maka gị ka ị na-agbalị aka gị na emebe gị ụlọ online n'ihu na-eme ya a eziokwu. Ịnwale n'elu 120,000 ndụ ihe dị na 3D; ị na--ohere jikọọ na ezigbo obodo esịnede imewe devotees, ndị ọkachamara na, na ụmụ akwụkwọ. Ya mere, mee ọsọ ọsọ ma tinye gị n'ebe obibi karịrị 850.000 obibi e na iji ngwa a.
2. The ime ụlọ 2
Nke a bụ ihe na-akpali akpali mgbaghoju anya egwuregwu na bụ ike nke na wrapping Player n'ime ya amaghị ụwa ruo ọtụtụ awa. N'ụzọ dị mwute, The ime ụlọ abụọ adịghị nwere Max atụmatụ. Ọ na-aga nke ọma na Kindle na Ya mere nwere ike ịbụ downloadable n'ebe ọ bụla Kindles na-awa. Ọ na-abịa dị iche iche uru na ha bụ brutally ịma aka n'ihi na ndị mmadụ na n'anya mpi; Ọzọkwa, o nwere egwu nsonaazụ ụda, bụ eri ahụ, na mfe ịgbanwe.
3. The ime ụlọ
Ụlọ ahụ bụ anụ ahụ puzzlers na-enfolded na a secrete egwuregwu. E mere ya n'ime a nnọọ anya-akụta 3D ụwa. Ụlọ ahụ bụ ka a ọgba ebe ọtụtụ omimi akpọkwa na-achọta niile Player nwata. Ọ nwekwara ike kwuru, dị ka na ezigbo encapsulation nke obi ụtọ na-atụ egwu chọpụtara. Egwuregwu bụ fireproof na mpako na-ewetara si n'ụwa e kere eke jikọtara na crazy njem kwabara site mma, ihe omimi, na ihe ize ndụ. Jikọọ na egwuregwu na-gaa n'ime a ikpọ na pụrụ iche ohere na-merges mesmerizing visuals na-akpali akpali nsogbu dozie.
4. Omuma Game ime ụlọ
Platform: Android 4.0 gbakwunyere
Kpochapụwo egwuregwu ụlọ bụ ngwa na awade debanyere aha ozi maka ndị kasị dị ugbu nyochaa dị na Omuma Game ụlọ. Ọ na-achọpụtazi ụlọ dị iche na saịtị-adị kwa ụbọchị maka Fim. Mgbe a fim na-nyere site a onye ọrụ ọ ga-ezitere na-anya-enye ihe ọmụma banyere ihe ọhụrụ reviews. Ọ bụrụ na a ngosi e Agbaghara site ihe ọ bụla, ọrụ nwere ike inyocha ndị utu aha nke kasị dị ugbu a Fim si n'ime ngwa. Ọzọkwa, ọ na-enyere mmadụ aka ịhọrọ nnọọ ọwa adabara ndenye aha na-enyere ọrụ mara otú ha na-achọ na-anakọta alerts.
5. Izere ụlọ: Limited Time
Platform: Androids 2.1 elu
Jikere Izere ụlọ: enwe na-akparaghị ókè ụzọ mgbapụ ọchịchọ egwuregwu. Ọ nwere ihe-ekere òkè storyline na-abịa na ya ika nke unforeseen bends. Bụ gị ụzọ mgbapụ ịmalite enthusiasts, mgbe ahụ, ị ​​na-achọghị ka uche si na oké ohere na-enwe ihe ị ga-omiiko banyere kasị zuo ezuo. Nke a bụ egwuregwu gị ahụkarị thriller na-agụnye ihe nile razzmatazz nke elekere na daga edinam. Players Na-atụ anya iji nye ngwọta 50 ụdị nke egwuregwu na-agụnye zoro ezo n'anya. Ò nwetụla mgbe ị chere ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-achọpụta onwe gị na a ụlọ na nri n'ime ya na ị bụ oge bọmbụ na ịpị pụọ ma na-njikere-ewe ezigbo? Ọ bụrụ na ị mgbe chọrọ tụọ larịị nke gị lanarị mmuo, gịnị mere ibudata a egwuregwu.
6. ụzọ ime ụlọ Ụzọ Mgbapụ Game
Ebumnuche nke a egwuregwu bụ agbapụ nke ụlọ na-enye azịza omimi Ị kpọghee ekwt ụzọ na breakout nke ụlọ. Ọ na atụmatụ nta egwuregwu nke bụ ezigbo ibibi gị free oge.
Nke a bụ nnọọ akpali akpali egwuregwu na ike ga-egwuri na Android n'elu ikpo okwu. Ọ bụ ezie na, ihe oyiyi na egwuregwu a bụ ndị mara mma mfe; e nwere Otú ọ dị ihe banyere egwuregwu na-adọta gị ma na-weghara gị ntị ruo ogologo oge. Echiche nke egwuregwu bụ ọnyà egwuregwu na a ụlọ; mgbe tọrọ atọ ha nwere ike inyocha na ụlọ gburugburu ebe obibi na-eji mkpịsị aka ha na-enweta gburugburu. Na usoro nke ikpọ na gburugburu ebe obibi, dị iche iche ihe na pụrụ inyere ha ụzọ mgbapụ si ụlọ nwere ike chọpụtara.
8. Murder ime ụlọ
Platform: Androids 2.3.3 elu
Nke a bụ a psychological egwu egwuregwu na-agụnye a Oghere Usoro egbu egbu kenyere na egwuregwu na ichu nta ọkpụkpọ. Ọ dịtụla mgbe ị na-achụgharị site a Oghere Usoro egbu egbu? Ọ bụrụ na ị na-aza nweghị, mgbe ahụ, ị ​​bụ banyere mara ihe ọ dị ka. Na-egwu egwuregwu a ị ga-enwe ume na-adị ndụ, na-aga megide niile emegide, na ịkata gị lanarị mmuo imeri onye iro gị.
9. 100 ụzọ na ụlọ Izere
Platform: Android 2.3 elu
Nke a bụ ihe kasị ugbu a ụzọ mgbaghoju anya ma ọ bụ na-ezo Game emepụta site "100 ụzọ gateways na chọpụta." Na-egwu egwuregwu ị na-achọpụta azịza nke egwuregwu na idozi multiple eju anya, n'ilu gbanahụ multiple ụlọ. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ịma aka na-amasị enye ụbụrụ gị a ọma mgbatị, download egwuregwu a ugbu a, ọ bụ n'efu. g
10. mansion (A mgbaghoju anya nke ụlọ)
Na egwuregwu a Player na-atụ anya mgbaghoju anya ụzọ ha ebe dị iche iche ụlọ na-eduzi kenjuputa Anne na-achọpụta na ihe omimi na obi a mansion nke a toymaker. E nwere anwansi na mansion na o nwere na-arụ ọrụ ya ụzọ mgbapụ.
Ndepụta nke Android egwuregwu ụlọ bụ n'ezie a nnukwu otu. N'elu na-atụ aro egwuregwu ụlọ depụtara na tụlere ná mkpirikpi isiokwu a bụ ụfọdụ n'ime ndị kasị mma e nwere taa. Games ụlọ bụ nnọọ egwuregwu na-akpali n'ihi na ndị mmadụ na n'anya elekere na daga ụdị egwuregwu. Ya mere, na-agụ site niile selections, na ibudata na ndị na otighiti gị fancy - ịdị na-akpọ egwuregwu.
> Resource> Game> Top-atụ aro Android Games ime ụlọ